के तपाईलाइ जति बेला पनि अल्छि लाग्ने गर्छ ? यस्ता छन् अल्छीपना हटाउने प्रभावकारी उपाय - ज्ञानविज्ञान
Don't Miss it तपाईंले आफ्नो शरीरलाई विक्री गर्नुपर्‍यो भने मूल्य कति राख्नुहुन्छ ? पढ्नै पर्ने लेख
Up Next दिनको नौ हजार पाइला हिँड्नुहाेस र स्मरणशक्ति गुमाउन बाट जाेगिनुहाेस
जमिनमा बसेर खाना खाँदा के-के फाइदा हुन्छ ? जान्नुहोस
– जमिनमा सुखासनमा बसेर खाना खाँदा मनको एकाग्रतामा बृद्धि हुन्छ । – यसले हाम्रो छाती र खुट्टालाई बलियो बनाउँछ । – यो…